Kunyorera - Bengbu Dongli Chemical Co, Ltd.
Kunyorovesa: Maindasitiri emvura kupfavisa inzira inoshandisa ion resini resini kudzikisa huwandu hwecalcium uye magnesium ions. Aya maalkaline epasi esimbi anogona kukonzera kuyera uye kusagadzikana kwehutano mukushandisa kwemazuva ese kwemvura nekugadzira calcium uye magnesium carbonate zviyero.
Kazhinji, Strong Acid Cation (SAC) resin inoshandiswa uye inogadziriswazve nesodium chloride (brine). Mune zviitiko zvepamusoro TDS mvura kana yakanyanya kuomarara mazinga, iyo SAC resin dzimwe nguva inotungamirwa neWeak Acid Cation (WAC) resin.
Kunyorovesa Inowanikwa Resins: GC104, GC107, GC108, MC001, MA113
Demineralization: zvakare inonzi deionization, inowanzo rondedzerwa sekubviswa kwecations dzese (semuenzaniso calcium, magnesium, sodium, potasium, simbi nezvimwe zvinorema simbi) uye anion (semuenzaniso bicarbonate alkalinity, chloride, sulfate, nitrate, silica uye CO2) kubva ku mhinduro mukutsinhana H + uye OH- ions. Izvi zvinoderedza zvese zvakanyungudutswa solids yemhinduro. Izvi zvinodikanwa kune akawanda maitiro akaomarara, akadai sekumanikidza kwekubhaira kushanda, chikafu uye mishonga yekushandisa, uye kugadzirwa kwemagetsi
Demineralization inowanikwa resini : GC107, GC108, GC109, GC110, GC116, MC001, MA113, GA102, GA104, GA105, GA107, GA202, GA213, MA201, MA202, MA213, MA301
DL407 ndeyekubvisa nitrate kubva pamvura inonwa.
DL408 ndeyekubvisa arsenic kubva pasi sulphuric acid mhinduro.
DL403 ndeye boron kubva pamvura inonwa.
Ultrapure Mvura: Dongli MB akateedzana akagadzirira kushandisa yakavhenganiswa mabhedhi resini emvura ye ultrapure anonyanya kugadzirwa kuzadzisa izvo chaizvo zvinodikanwa zveindasitiri yemagetsi yeiyo wafer uye microchip kugadzirwa. Izvi zvinodikanwa zvinoda iyo yemhando yepamusoro yemvura (<1 ppb Yese Organic Carbon (TOC) uye> 18.2 MΩ · cm resistivity, iine nguva shoma yekugezesa), ichiri kubvisa kusvibiswa kwemaseketi akachena epamusoro apo ion resin resin inotanga kuiswa.
MB100 ndeye EDM waya yekucheka.
MB101, MB102, MB103 ndezemvura ye ultrapure.
MB104 ndeyeye condensate kupukuta musimba chirimwa.
Dongli zvakare inopa chiratidzo MB resin, kana iro resini ikakundikana rinoratidza imwe vara, nekukurumidza kuyeuchidza mushandisi kutsiva kana kumutsiridza munguva.
Dongli inopa yakazara mutsara weakakwira kuita resini yeshuga yese, chibage, gorosi uye cellulose decolorization, hydrolyzate, kupatsanura uye kunatsa mashandiro pamwe nekunatswa kwe organic acids.
Organic Wastewater Kurapa Ine Phenol H103
Kubviswa kwakasimba kwesimbi, Arsenic (DL408), Mercury (DL405), Chromium (DL401)
Pedza gasi kurapwa (XAD-100)
Kubviswa kwegoridhe kubva kune cyanide pulp MA301G
Uranium kubviswa kubva ore MA201, GA107
Chemical & Simba Kudyara
Yakanatswa brine muionic membrane caustic indasitiri soda DL401, DL402
Kurapa kwe condensate uye yemukati mvura inotonhorera mumidziyo yekupisa MB104
Kugadzirira kwemvura inogadziriswa mumagetsi enyukireya.
Dyara Bvisa & Kuparadzanisa
D101, AB-8 resin anoshandiswa kuburitsa saponins, polyphenols, flavonoids, alkaloids uye Chinese mishonga yemakwenzi.